ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေကို အမှုအခြေအနေများ မပြောရန် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတားမြစ် - Myanmar Pressphoto Agency
MPA October 15, 2021 1 min read
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုခြင်းမပြုရန် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်တားမြစ်လိုက်သည်။
ရှေ့နေဦးခင်မောင်ဇော်သည် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက တရားမဝင်ဟုသတ်မှတ်ထားသည့် သတင်းမီဒီယာများကို အမှုအခြေအနေများ ပြောဆိုမှုသည် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုနှင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုတို့ကို ဖြစ်စေသည်ဟု ပျဥ်းမနားမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလက်မှတ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်တားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက အဂတိလိုက်စားမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်၊ ၅၀၅ ခ၊ သဘာဝဘေးစီ/ မံဥပဒေပုဒ်မများဖြင့် မတရားဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားသည်။
#MPA #ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေ #အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတားမြစ်
ပုံစာ – နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီတို့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက စွဲဆိုထားသည့် အမှုအတွက် ရုံးချိန်းပုံအဟောင်း
Terrorist SAC Bans Daw Aung San Suu Kyi’s Lawyer from talking about the Situation of the Case
The terrorist SAC has issued Section 144 to prohibit talking about the situation of Daw Aung San Suu Kyi’s case.
Telling the situations of the case by Attorney U Khin Maung Zaw to media which the terrorist SAC designates as illegal media causes riots, the ban was issued with the signature of the general administrator of Pyinmana town.
The State Counsellor is unjustly arrested and sued by the terrorist SAC on corruption, telecommunications law, export and import law, 505(b) and natural disaster management law.
#MPA #DawAungSanSuuKyi’sLawyer #TerroristSACBans
Photo – Old Court Appointment Picture of the President, State Counsellor and Napyitaw Council by Terrorist SAC’s Sue
Tags: DASSK Media Myanmar News Press
Previous: ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြ နှုတ်ထွက်ရန် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှအရာရှိနှစ်ဦးကခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ထွက်ဆို
Next: ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုလင်းပိုင်စိုး သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၁၈ရက်ကြာမှ မိသားစုကသိရှိရ